U soosaarayaasha bolt | Shiinaha U qeybiyeyaasha bolt, Warshad
Nooca U-qaabeeya. Bool badanaa loo isticmaalo rakibida tuubada si loo hagaajiyo tuubooyinka. Boolku wuxuu u eg yahay qaab U-qaab ah. Waxaa loo adeegsaday iskuxirka laba firmware. Waxaa jira fasalada 4.8 iyo 6.8, kuwaas oo lagu daaweeyay galvanized kulul si loo gaaro saameyn ka hortagga daxalka.
Awood sare U-bool
Awood sare U-bolt, oo sidoo kale loo yaqaan 'U-card' xoog badan. Bool badanaa loo isticmaalo rakibida tuubada si loo hagaajiyo tuubooyinka. Boolku wuxuu u eg yahay qaab U-qaab ah. Waxaa loo adeegsaday iskuxirka laba firmware. Waxaa jira fasalada 4.8, 8.8, 10.9 iyo 12.9. Guud ahaan, xoogga sare wuxuu ka sareeyaa heerka 8.8, kaas oo lagu gartaa xoog adag iyo xoog jiida oo xoog leh. Midab madow, dusha siman.
U-bolt, oo sidoo kale loo yaqaan 'u-card'. Bool badanaa loo isticmaalo rakibida tuubada si loo hagaajiyo tuubooyinka. Boolku wuxuu u eg yahay qaab U-qaab ah. Waxaa loo adeegsaday iskuxirka laba firmware. Waxaa jira 4.8 fasal, 8.8 fasal, 10.9 fasal iyo 12.9 fasal. Mashiinka kulul ee loo yaqaan 'U-bolt' galvanized U-bolt waa U-bolt ka dib marka lagu daweeyo dusha sare ee diirran, sidaas awgeedna lagu gaaro saameynta anti-corrosion.